तालिबान लडाकुहरु काबुल प्रवेश, सरकारी कर्मचारीको भागाभाग, राष्ट्रपति घानीको अबस्था के छ ? — Imandarmedia.com
तालिबान लडाकुहरु काबुल प्रवेश, सरकारी कर्मचारीको भागाभाग, राष्ट्रपति घानीको अबस्था के छ ?
एजेन्सी। तालिवान लडाकुहरू राजधानी काबुल प्रवेश गर्न सुरु गरेको अफगानिस्तानको गृह मन्त्रालय र वि द्रोही समूहले जनाएको छ । आइतबार पूर्वी सहर जलालाबाद कब्जा गरेको केही घण्टापछि नै विद्रोहीहरू काबुल प्रवेश गर्न सुरु गरेको समाचार आएको हो ।
अफगान सरकार र तालिवानबीचको वार्ता स्थल बनेको दोहामा रहेका एक तालिवानका नेताले हिं सामा जोड नदिन र काबुल छाडेर जान चाहनेहरूलाई सुरक्षित रूपमा जान दिन निर्देशन दिइएको अलजजिरालाई बताएका छन् । अब राष्ट्रपति असरफ घानीले तालिवानसँग संघर्ष गर्छन् वा आत्मसमर्पण गर्छन्, त्यो चाहिँ स्पष्ट भइसकेको छैन ।
​यता, राष्ट्रपति घानीको कार्यालयका प्रमुखले ट्वीटरमा काबुलका जनतालाई नअत्तालिन आग्रह गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘कृपया चिन्ता नलिनु होला । केही समस्या छैन । काबुलको अवस्था नियन्त्रणमा छ ।’ तालिबान विद्रोहीहरू चारै दिशाबाट राजधानी प्रवेश गर्न थालेको समाचार आए लगत्तै उनले यस्तो ट्वीट गरेका थिए ।
शनिबार साँझ ट्वीटरमा छोटो सन्देश दिएयता घानी भने सार्वजनिक रूपमा देखिएका छैनन् ।यता, तालिवानले आफूहरू काबुल प्रवेश गर्न थालेको सूचना जारी गर्दै आफूहरू शक्ति प्रयोग गरेर काबुल कब्जा गर्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।
अलजजिराका रिपोर्टर चार्लट बेलिसले गोलीबारीसहित साइरनको आवाज सुनिएको बताएकी छन् । सहरमा हेलिकप्टरहरु लगातार उडिरहेको उनको भनाइ छ । कर्मचारीहरू सरकारी भवन छाडेर भागेका छन् भने सर्वसाधारणहरू खुला पार्कमा बस्न थालेका छन् ।
समाचारसंस्था रोएटर्सका अनुसार अफगानिस्तानमा तालिबान लडाकुहरू राजधानी काबुल छिर्न सुरु गरेका विवरणहरू प्राप्त हुन थालेका छन्। समाचारसंस्था रोएटर्सले आन्तरिक मामिलामन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै जनाएअनुसार लडाकुहरू राजधानीको सबैतिरबाट छिर्न थालेका हुन्।
तालिबान समूहले काबुलमा हिंसा नगर्न र बाहिरिन चाहनेलाई सुरक्षित रूपमा निस्कुन दिन आफ्ना लडाकुहरूलाई निर्देशन दिएको दोहास्थित एक नेतालाई उद्धृत गर्दै रोएटर्सले जनाएको छ।
उनले सुरक्षा दिइएका क्षेत्रतर्फ जान महिलाहरूलाई आग्रह समेत गरेका छन्। आइतवार बिहान मात्रै लडाकुहरूले पूर्वी सहर जलालाबादलाई बिनासङ्घर्ष नियन्त्रणमा लिएका थिए। बीबीसीकी याल्दा हकिमका अनुसार काबुल छिर्ने क्रममा तालिबान लडाकुहरूले ठूला प्रतिरोधको सामना गरिरहनुपरेको छैन।
तर अफगान राष्ट्रपतिको कार्यालयले स्थिति नियन्त्रणमा भएको दाबी गरेको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालयले पास्तो भाषामा ट्विटरमा लेखेको छः “काबुलमा फाट्टफुट्ट गोली चलेको छ, काबुलमा आक्रमण भएको छैन। सहरको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न देशका सुरक्षा र प्रतिरक्षा फौजहरू विदेशी साझेदारसँग मिलेर काम गरिरहेका छन्, स्थिति नियन्त्रणमा छ।
तर एक अफगान सांसद फर्जाना कोचाईले बीबीसीलाई मानिसहरू राजधानीबाट भाग्न कति आतुर छन् भनेर बताएकी छन्।”मलाई थाहा छैन, उनीहरू कहीँ पनि जान सक्दैनन्। कुनै ठाउँ बाँकी छैन। विमानहरू भरिएका हुनसक्छन् अनि आज काबुलबाहिर – जस्तै भारत वा अन्य छिमेकी मुलुक जाने – उडान पनि। मैले त्यता जान लागेका साथीहरूसँग सोधेकी थिएँ। उनीहरूका अनुसार विमान भरिएका र आफूहरू अड्किएका छन्,” उनले भनिन्।
अफगान यु द्धको पृष्ठभूमि के हो ?
काबुलमा तालिबान शासन :
दक्षिणपश्चिम अफगानिस्तानबाट सुरु भयो तालिबानले बिस्तारै आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्‍यो। सन् १९९५ को सेप्टेम्बर महिनामा तालिबानले इरानसँग सीमा जोडिएको हेरात प्रान्त आफ्नो नियन्त्रणमा लियो। त्यसको एक वर्षपछि देशको राजधानी काबुल तालिबानको नियन्त्रण पुग्यो।राष्ट्रपति बुरानुद्दिन रब्बानीलाई हटाएर तालिबान देशको सत्तामा पुग्यो। सन् १९९८ सम्ममा अफगानिस्तानको ९० प्रतिशत भूभागमा तालिबानको नियन्त्रणमा आइसकेको थियो।
तर न्यूयोर्कमा आक्रमण भएको एक महिनाभित्रै अक्टोबर ७, २००१ मा अमेरिकी नेतृत्वमा अफगानिस्तानमा सैन्य कारबाही सुरु भयो। डिसेम्बर महिनाको पहिलो हप्तामा तालिबान सत्ता धराशायी भयो। तालिबान अभियान सुरु गराएको आरोप पाकिस्तानलाई लाग्ने गरेको छ। तर इस्लामाबादले भने त्यसको खण्डन गर्दै आएको छ।
तालिबान सन् १९९० को दशकको मध्यदेखि सन् २००१ सम्म अफगानिस्तानको सत्तामा रह्यो। त्यसबेला साउदी अरब, यूएई र पाकिस्तान गरेर तीन देशले मात्र उसलाई औपचारिक मान्यता दिएका थिए। दुई देशले तालिबानसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद गर्दा पनि पाकिस्तानले भने पछिसम्म कायम राखेको थियो।
तर न्यूयोर्कमा आ क्रमण भएको एक महिनाभित्रै अक्टोबर ७, २००१ मा अमेरिकी नेतृत्वमा अफगानिस्तानमा सैन्य कारबाही सुरु भयो। डिसेम्बर महिनाको पहिलो हप्तामा तालिबान सत्ता धराशायी भयो।
तालिबान अभियान सुरु गराएको आरोप पाकिस्तानलाई लाग्ने गरेको छ। तर इस्लामाबादले भने त्यसको खण्डन गर्दै आएको छ। तालिबान सन् १९९० को दशकको मध्यदेखि सन् २००१ सम्म अफगानिस्तानको सत्तामा रह्यो। त्यसबेला साउदी अरब, यूएई र पाकिस्तान गरेर तीन देशले मात्र उसलाई औपचारिक मान्यता दिएका थिए। दुई देशले तालिबानसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद गर्दा पनि पाकिस्तानले भने पछिसम्म कायम राखेको थियो।
यसै गरि, सन् २००१ मा न्यूयोर्कस्थित वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा भएको आक्रमणपछि अफगानिस्तानको शक्तिमा रहेको तालिबान समूहको चर्चा विश्वस्तरमा भयो। न्यूयोर्कमा भएका आक्रमणको आरोप लागेका ओसामा बिन लादेन र अल-कायदालाई तालिबानले अफगानिस्तानमा सुरक्षित रूपमा बस्न सघाएको आरोप लगाइयो।
सेप्टेम्बर ११ आक्रमणपछि अमेरिकाको नेतृत्वमा तालिबानलाई सत्ताच्युत गरियो। तर पछि तालिबानले बिस्तारै आफ्नो शक्ति बढाउँदै लग्यो र पाकिस्तानमा पनि बलियो रूपमा देखा पर्‍यो। सबैले नागरिक लगिसके हाम्रो उद्धार कहिले हुन्छ सरकार भन्दै अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीले पठाए यस्तो सन्देश :
तालिवानी विद्रोहीहरुको प्रभाव बढ्दै गएपछि अशान्त रहेको अफगानिस्तानमा कार्यरत नेपालीहरु आफूलाई विदेशी निकायले उद्धार गर्ने आशामा बसेका छन् । नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकको उद्धारका लागि कुनै पहल वा निर्णय गरिसकेको छैन । त्यहीकारण विदेशीको भर पर्नुबाहेक अर्को विकल्प पनि नेपालीसामु देखिँदैन ।
‘यहाँ आफ्ना कर्मचारीहरुलाई विदेशी निकायले धमाधम लैजान थालेका छन् । सडक सञ्जालबाट लैजाँदा जोखिम हुन्छ भन्दै उनीहरुले कार्यस्थलमै हेलिकप्टर ल्याउने गरेका छन्,’ काबुलस्थित जर्मनी दूतावासमा कार्यरत एक नेपालीले भने, ‘एयरपोर्टबाट ५–१० मिनेट टाढा रहेका ठाउँमा पनि हेलिकोप्टर ल्याइन्छ र एयर लिफ्टिङ गरी विमानस्थलसम्म पु–याइन्छ । हामीलाई पनि उनीहरुले यसरी नै उद्धार गर्छन् भन्ने आशा छ ।’जर्मनी दूतावासमा ३५ जना नेपाली कार्यरत रहेको उनले बताएका छन । जर्मनीले यसअघि नै आफ्ना नागरिकलाई घर फर्कन निर्देशन दिइसकेको छ ।
त्यसैगरी अमेरिकाले पनि काबुलस्थित दूतावासमा आफ्ना कर्मचारी कटौती गरेको छ, दूतावासका कर्मचारी र आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्न उसले तीन हजार सेना काबुल पठाएको थियो ।भारतले उत्तरी शहर मजार–ए–सरिफमा रहेको आफ्नो कन्सुलेट कार्यालय बन्द गर्दै कर्मचारी तथा आफ्ना नागरिक लिन सैनिक विमान पठाएको थियो ।बेलायतले ६ दिनअघि र फ्रान्सले एक महिनाअघि नै आफ्ना नागरिकलाई घर फर्कन निर्देशन दिइसकेका छन् । नेपाल सरकारले भने आफ्ना नागरिकको उद्धारका विषयमा कुनै निर्णय लिइसकेको छैन ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले झन्डै एक सयको हाराहारीमा नेपालीहरु अफगानिस्तानमा रहेको जनाएको छ । यता, दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले त्यहाँ १५ सयको हाराहारीमा नेपालीहरु रहेको जनाएको छ । तर, यहाँ अवैधरुपमा बसिरहेका नेपालीहरुको संख्या योभन्दा ठूलो हुन सक्ने अनुमान छ ।अमेरिकी र नेटो सैनिकको बर्हिगमनसँगै अफगानिस्तान संकटमा फसेको छ । यहाँका, ३४ प्रान्तमध्ये १९ प्रान्तमा तालिवानले कब्जा जमाइसकेको छ । काबुलबाट ५० किलोमिटरको दूरीमा तालिवानले आफ्नो उपस्थिति देखाइसकेको छ ।
आफ्नो घर छाडेर काबुल वा तालिवानको कब्जा नरहेका शहरतर्फ गइरहेका नागरिकहरुले तालिवानको आक्रमणलाई रोक्न अफगानी सेना असफल भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।अफगानिस्तानका राष्ट्रपति असरफ घनीले शनिबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै अफगानिस्तानको सुरक्षा बल र सेनालाई फेरि एकजुट गर्नु नै आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएका छन् ।